> Resource> iPod> iPod aka Manager: Jikwaa faịlụ gị iPod aka
Mgbe i nwere ihe iPod aka, i nwere ike na-amasị na-faịlụ na ya nke ọma jisiri. Iji mee ka ya, ị nwere ike ịgbalị iTunes. Ọ bụ na-enye aka ka mmekọrịta music, videos, foto gị iPod aka. Otú ọ dị, na-emekarị, otu iPod aka nwere ike mmekọrịta otu kọmputa. Ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa gị iPod aka na gị ezinụlọ 'ma ọ bụ enyi' na kọmputa, ị ga-mmekọrịta gị iPod aka na iTunes mbụ. Ma, dị ka ị maara, oge ọ bụla ị mmekọrịta, ị ga-aga na data na gị iPod aka.
Na nke a, jikwaa gị iPod aka nke ọma, i nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Nke a iPod aka njikwa-ahapụ gị nyefee data, dị ka music, na kọmputa na iTunes, idetuo data site na kọmputa gị iPod aka, na ihichapụ na-abaghị uru data onwe elu gị iPod Touch ohere.
Download a iPod aka njikwa na-faịlụ na iPod aka ọma haziri!
Cheta na: TunesGo nwere ike ijikwa music, videos, Podcast, photos na ndị ọzọ. Ebe a, anyị na-music screenshot dị ka ihe atụ. Cheta na ị na-agaghị ekwe nyefee photos, na kọntaktị na SMS ka iTunes.
Na-agba ọsọ a iPod aka management software
Ka malitere, na-eji eriri USB jikọọ gị iPod aka na kọmputa. Wụnye na ẹkedori a njikwa iPod aka na kọmputa gị. Mgbe ahụrụ, gị iPod aka ga-egosi n'elu ke akpan window.
Nyefee music, videos ka iTunes na ndị ọzọ na kọmputa
Ịnwere ike ịnyefe music, videos, foto, na kọntaktị na SMS si gị iPod aka ka kọmputa. Ọzọkwa, a usoro na-ahapụ gị nyefee music, videos na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes dị ka mma. Họrọ faịlụ na ị chọrọ nyefee. Pịa "Export ka" mbupụ faịlụ.
Etinye music, videos, foto na ndị ọzọ na iPod aka
Nke a na usoro na-enye gị ike na-etinye music, videos, listi ọkpụkpọ, foto, kọntaktị site na kọmputa na-iPod aka. E wezụga, ị pụrụ ọbụna nyefee iTunes listi ọkpụkpọ gị iPod aka.
Hichapụ music, videos photos, wdg na iPod aka na onye njikwa iPod aka
Na a usoro, ị nwere ike ihichapụ music, videos, photos na ndị ọzọ na gị iPod aka. Họrọ ndị kwekọrọ ekwekọ faịlụ gị iPod aka. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ" ka ihichapụ ha.
Ma nsụgharị adịghị akwado ihichapụ smart listi ọkpụkpọ.
The Windows version akwado iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3 na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ e wepụtara ọhụrụ iOS 9. The Mac version bụ dakọtara na iPod aka 5 na iPod aka 4 dabeere iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9.
Ugbu a, Mac version anaghị akwado hapụụrụ na kọntaktị na SMS.